Lalao sy fanatanjahantena tany Egypt taloha | Fitsangatsanganana tanteraka
Isabel | | Ejipta
Ao amin'ny kolontsaina fahizay any Mediterane, ny fampiharana ny fanatanjahantena dia mifandray akaiky amin'ny fankalazana ara-pivavahana sy ny fialamboly. Na izany aza, ny foto-kevitry ny fanatanjahantena tany Egypt taloha dia tena tsy mitovy amin'ny ankehitriny.
Raha ny marina, ny mpikaroka sasany dia manamafy fa nanao fampiharana ara-batana izy ireo fa tsy manao fanatanjahan-tena toy izany satria tsy nanana teny akory hiresahana an'io asa io izy ireo. Ka nanao ahoana ny fanatanjahantena tany Egypt taloha?
1 Inona no fanatanjahan-tena tany Egypt taloha?
2 Iza no nilalao fanatanjahan-tena tany Egypt taloha?
3 Nanao spaoro ve ny vehivavy?
4 Moa ve ny fanatanjahantena noheverina ho fahitana tany Egypta taloha?
5 Inona ny fetin'ny farao?
6 Nisy farao niavaka tamin'ny atleta ve?
7 Inona no anjara asan'ny Nile ho an'ny fanatanjahantena tany Egypt?
8 Nisy andriamanitra mifandray amin'ny fanatanjahan-tena amin'ny angano ejipsiana ve?
Inona no fanatanjahan-tena tany Egypt taloha?
Ny toetrandro ao amin'ny firenena dia mety indrindra amin'ny fandaniana ny ankamaroan'ny andro any ivelany ary izay manohana ny fanaovana fanatanjahan-tena, nefa tsy manana ny fiheverana ho fanatanjahantena satria torontoronina ankehitriny. Na izany aza, fantatr'izy ireo tsara ny fifandraisana misy eo amin'ny fampihetseham-batana sy ny hozatry ny hozatra tsara.
Amin'ny ankapobeny, Ny fanatanjahantena tany Egypta fahiny dia nisy lalao ivelany sy tolona miaramila ary fiofanana ady. Tao amin'ny toerana arkeolojika sasany, dia nisy fasana nisy sary mampiseho ny haiady toy ny karate sy judo. Nisy solontena an-tsary ihany koa hita tao amin'ny fasan'i Jeruef izay olona marobe no miseho amin'ny toerana miady toa ny ady totohondry.
Fanatanjahan-tena iray hafa tany Egypt fahiny izay fanazaran-tena taloha dia ny atletisma. Momba ny hazakazaka kely avy amin'ny teboka iray mankany amin'ny iray hafa hahitana hoe iza no haingana kokoa. Ny fandehanana any ivelany mandritra ny fotoana maharitra, ny fihazakazahana na ny filomanosana dia zavatra mahazatra indrindra ho azy ireo.
Hetsika fanatanjahan-tena iray hafa mampiavaka ny Egyptianina ny fihazana hipopotama, liona na elefanta. Misy tantara milaza fa i Farao Amenhotep III dia tonga nihaza omby 90 tao anatin'ny iray andro ary nahavita nanindrona ampinga varahina tamin'ny alàlan'ny fitifirana zana-tsipika dimy tamin'ny tsipika iray ihany i Amenhotep II Mikasika ny olona dia nihaza ihany koa izy ireo saingy lalao kely toy ny fihazana gana any anaty rano io.
Ny Egyptianina koa dia nikarakara hazakaza-kalesy ary koa fifaninanana zana-tsipìka, izay ny fanatanjahantena ho an'ny tsara indrindra tamin'izany.
Iza no nilalao fanatanjahan-tena tany Egypt taloha?
An'arivony taona maro lasa izay, tsy ela dia ela ny androm-piainana ary tany Egypt dia tsy nihoatra ny 40 taona izany. Izany no antony nahatonga ny olona nanao fanatanjahan-tena ho tanora sy mora zatra manao asa ara-batana.
Nanao spaoro ve ny vehivavy?
Na dia mety mieritreritra zavatra hafa aza ianao, ny vehivavy ejipsianina taloha dia nilalao fanatanjahan-tena saingy tsy hetsika mifandraika amin'ny hazakaza-tsoavaly, tanjaka na rano izy ireo fa an'ny akrobatika, ny fikafika ary ny dihy. Izany hoe, ny vehivavy dia nitana andraikitra lehibe tamin'ny fanasana manokana sy fankalazana ara-pinoana toy ny mpandihy sy akrobat. Androany isika dia afaka milaza fa ireo vehivavy ireo dia nanao zavatra nitovy tamin'ny gymnastika rhythmic.
Moa ve ny fanatanjahantena noheverina ho fahitana tany Egypta taloha?
Tsy toy ny olona hafa toa ny Romanina na ny Grika, tany Egypt dia tsy noheverina ho fahitana fotsiny ny fanatanjahantena. Amin'ny alàlan'ny sary sy ny fanehoana hita tao amin'ny fihadiana arkeolojika dia tsy azo atao ny mahita andinin-tsoratra momba ny toerana lehibe na scenario mifandraika amin'ny fampisehoana ara-panatanjahantena lehibe.
Midika izany fa tany Egypta taloha dia tsy nisy zavatra toy ny Lalao Olaimpika fa kosa Nifaninana tamin'ny sehatra tsy miankina ny Egyptianina ary nanao izany ho fialamboly tsotra izao. Tsy nisy mpijery akory.
Saingy, ankoatr'izay, nisy festival izay fanaon'ireo farao ary amin'ny lafiny sasany dia mety misy ifandraisany amin'ny hetsika ara-panatanjahantena. Ity festival ity dia notanterahina rehefa nanjaka nandritra ny telopolo taona ny mpanjaka, noho izany dia fankalazana tsy fahita firy izy io satria ambany ny androm-piainan'ny mponina tamin'izany fotoana izany.
Inona ny fetin'ny farao?
Nandritra ity fankalazana festival ity nandritra ny 30 taona nanjakan'ny farao, ny mpanjaka dia tsy maintsy nitety kianja kianja tamina karazana hazakazaka fombafomba izay ny tanjony dia ny hampiseho amin'ny olony fa mbola tanora izy ary nanana tanjaka ampy hanohizany ny fitondrana ny firenena.
Ny festival voalohany amin'ny karazany dia nankalazaina taorian'ny 30 taona nanjakany ary isaky ny telo taona taorian'izay. Ohatra, voalaza fa ny pharaoh Ramses II dia maty nandritra ny sivifolo taona mahery, noho izany dia tokony hanana fotoana be dia be hanaovana fety isan-karazany izy, ary ankanavaka ao anatin'io fotoana io.
Nisy farao niavaka tamin'ny atleta ve?
Farao Ramses II dia ela velona ary nandray anjara tamin'ny festival-tsingerin-taona maro nefa Amenhotep II izay noheverina ho maodelin'ny mpanjaka atletisma, avy amin'ny fomba fijery estetika na ara-batana.
Inona no anjara asan'ny Nile ho an'ny fanatanjahantena tany Egypt?
Ny reniranon'i Neily no làlambe lehibe eto amin'ny firenena tamin'izany fotoana izany, izay namindrana ny entana sy nandehanan'ny olona. Ho an'izany, sambo namboarina na niondranana no nampiasaina, noho izany dia nahay an'ity famaizana ity ny Egyptianina.
Izany no antony ahafahan'izy ireo mikarakara fifaninanana manokana any amin'ny Neily, na amin'ny sambo na amin'ny filomanosana, fa tsy fifaninanana amina besinimaro nanolorana ilay mpandresy.
Mikasika ny jono dia mitazona antontan-taratasy izay mampiseho fa Tao amin'ny Neily dia nisy ihany koa ny fifaninanana sasany tsy miankina hijerena izay mahavita manararaotra indrindra..
Nisy andriamanitra mifandray amin'ny fanatanjahan-tena amin'ny angano ejipsiana ve?
Tany Ejipta fahiny dia nisy andriamanitra saika tamin'ny lafim-piainana rehetra saingy mahaliana fa tsy an'ny fanatanjahan-tena satria, araka ny nomarihiko teo aloha, tamin'izany fotoana izany dia tsy noheverina ho toy ny ankehitriny ny fanatanjahantena.
Na izany aza, ny egyptiana raha manompo andriamanitra miendrika biby izy ireo noho ny toetra natoraly azy ireo. Izany hoe ireo andriamanitra manana vorona vorona dia gaga noho ny hakingany sy ny fahaizany manidina, ireo andriamanitra manana endrika omby kosa dia nataon'ny herin'ireto zavaboary ireto, toy ny amin'ireo biby hafa toy ny voay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Lalao sy fanatanjahantena tany Egypt taloha